रेशमपछि मनांगेको सपथ होला कि नहोला ? | NepalDut
रेशमपछि मनांगेको सपथ होला कि नहोला ?
- रेशमले जेलबाटै पाउने, मैले किन नपाउने : मनांगे
प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित रेशम चौधरीले बिहीबार सपथ लिए । कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँकाचोरी मुद्दामा जेल सजाय भोगिरहेका चौधरीले सपथ लिएसंगै गण्डकी प्रदेश सांसद दीपक मनाङ्गेको सपथबारे चर्चा सुरु भएको छ ।
केही दिन पहिले गण्डकी प्रदेशसभामा पुगेर उनले सपथ गर्न पाउँ भनी निवेदसमेत दर्ता गरिसकेका छन् । गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयले मनाङ्गेको निवेदन १८६ नम्बरमा दर्ता गरेको छ ।
मनाङ्गे तत्कालीन पुनरावेदन अदातलबाट दोषी ठहर भएका तर सर्वोच्चबाट फैसला आइ नसकेकाले सपथ लिन पाउनुपर्ने तर्क उनका पक्षमा रहेकाहरूले गरेका छन् । प्रदेशसभा नियमावलीमा फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएकालाई सपथ रोक्ने वा खुल्ला गर्ने कुनै स्पष्ट व्यवस्था रहेको छैन । नियमावलीमा बिना जानकारी लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित हुनेको पद खारेज हुने उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मनाङेको सपथ के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । यसबारे छलफल गर्न गत शनिबार सभामुखले बोलाएको बैठकमा संसद तथा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्ति नेपालका सांसद अनुपस्थित भएपछि यसबारे छलफलै भएन ।
मनाङ्गेको सपथ रोक्नुपर्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेस, नयाँ शक्ति र जनमोर्चा छन् । मनांगेलाई सपथ गराए प्रदेशसभा अवरुद्धसम्म गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।
फौजदारी अभियोगमा जेल परेकाले ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाइने व्यवस्था प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ मा छ। गुरुङले भने चुनाव जितिसकेकाले जटिलता देखिएको हो । मनाङ्गेले आफूले सपथ लिन पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । ‘जेलमा हुने रेशम चौधरीले सपथ लिएको सुनें, म त बाहिरै छु। अब मेरो पनि सपथ लिने बाटो खुला भएको छ’ उनले भने । सर्वोच्चको अन्तिम फैसला जस्तोसुकै आए पनि आफूले स्वीकार गर्ने उनले बताए ।